घर र अफिसमा राख्नुस् यी ५ बिरुवा, प्राप्त हुनेछ सकारात्मक ऊर्जा:: Naya Nepal
घर र अफिसमा राख्नुस् यी ५ बिरुवा, प्राप्त हुनेछ सकारात्मक ऊर्जा
काठमाडौ । सकारात्मक ऊर्जाको हामी सबैलाई आवश्यकता हुन्छ। आफ्नो आसपासमा सकारात्कमता बनाइराख्नका लागि हामी कयौं प्रयास गछौं ताकि पोजेटिभ इनर्जीको माहोल बन्न सकोस् अनि सबै नकारात्मक ऊर्जा हामीबाट टाढा जाओस्।
सकारात्मक ऊर्जाका लागि केही केही बिरुवाले पनि साथ दिने गर्छन्। हरियालीमा मानिसको मनमा सकारात्मक ऊर्जा दिन सहायता गर्छ । त्यस कारण केही यस्ता बोट–बिरुवा छन्, जसले हामीलाई ऊर्जावान बन्न मद्दत गर्छन्।
तुलसी स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै गुणकारी वस्तु हो। यो गुणकारी बिरुवा स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन सकारात्मक ऊर्जाका लागि पनि निकै फाइदायुक्त हुन्छ।
सकारात्मक ऊर्जाका लागि शरीर तथा मन चुस्त र दुरुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । शरीर र मनको थकानलाई टाढा गर्न लागि मेहन्दी निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो बिरुवा घरमा राख्दा निन्द्रको समस्या समेत अन्त्य हुन्छ ।
घरको वातावरणलाई खुसी र सकारात्मक बनाउनका लागि मनिप्लान्ट पनि निकै सहयोगी हुनेछ । यस बिरुवाले घरमा रहेको नकारात्मकतालाई बाहिर लैजान्छ।
शरीरको सुन्दरताका लागि एलोभेराको निकै महत्त्व छ तर के तपाईंलाई घरमा रहेको नकारात्म ऊर्जा हटाउनका लागि एलोभेरा महत्त्वपूर्ण हुने कुरा जानकारी छ ?
बेम्बो ट्रीले भाग्य तथा प्यारयुक्त अवस्था बनाइराख्नका लागि सहयाता गर्छ। यो सानो खालको बाँसलाई खासै हेरचाहको आवश्यकता पनि पर्दैन। सानो शिशाको भाँडोमा थोरै पानी रखेर एक कुनामा यसलाई राख्न सकिन्छ।
तौल कम गर्ने चक्करमा कतै यस्तो गम्भीर गल्ती त गरिरहनु भएको छैन, यो हो सही र सरल तरिका
काठमाडौं । अहिले लकडाउनको समयमा तौल घटाउन व्यक्तिहरू प्रायः खान कम गर्ने गर्छन । यस्लाई डाइटिङ शुरू गरेको भन्ने गरिन्छ । तर यी सबै तरिकाले तौल कम गर्नुको सट्टा शरीर कमजोर हुन्छ र फेरि बारम्बार बिरामी हुने खतरा हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा, यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि जब तपाईले तौल घटाउनुहुन्छ तब कमजोर महसुस नगर्नु स्वस्थ तौलको संकेत हो । यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईं तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने खाना कम गर्ने भन्दा पनि मिलाएर भोजन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । तपाईंले बिहानको खाजामा स्वस्थ चीजहरू लिनु पर्छ । आउनुहोस्, ती चीजहरू के हुन् भनेर जानकारी लिउ…
धेरै व्यक्तिहरु आफ्नो तौल सन्तुलित राख्न दलिया खान्छन् । तपाईं यसलाई दूधसँग मिसाएर वा तरकारीहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ । कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिजले तरपुर दलिया सजिलै पचाइन्छ ।
ओटलाई फाइबरको स्रोत मानिन्छ । यसमा एन्टीआक्सीडन्ट्स पनि पाइन्छ । जसले तपाईंलाई स्वस्थ राख्नका साथै हृदय रोगहरूबाट बचाउँछ । ओट रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र मधुमेह र कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राख्छ ।
मल्टीग्रेन ब्रेड स्यान्डविच मल्टीग्रेन रोटी स्यान्डविच बिहानको खाजामा सब भन्दा फाइदाजनक हुन्छ । तपाईं यसमा टमाटर, कांक्रो आदि थपेर तरकारीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौं । केहि चीजहरू मानसिक शान्ति भन्दा बढी मूल्यवान छन् । यसलाई प्राप्त गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये सावधान वित्तीय योजना र सेफगार्डहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी केहि मूल्यवान सेवाहरू छन् जसले तपाईलाई यस सम्बन्धमा सहयोग गर्न सक्छन् । आज हामी केही उपायहरुका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
१, तपाईंको जीवन बीमाबाट अधिक पाउनुहोस्
जीवन बीमा तपाईंको परिवारको भविष्य, आर्थिक रुपमा सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका हो । जब तपाईंको परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, तपाईंको कुनै पनि परिस्थिति परिवर्तन भएको खण्डमा सहयोग गर्न पनि यो आवश्यक पर्दछ ।
त्यस तरीकाले यदि तपाईं वा तपाईंको परिवारले उक्त रकम दावी गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं शान्त हुनुहोस् किनभने बीमामार्फत पाउने रकम तपाईंको आर्थिक आवश्यक्ताहरु पूरा गर्न राशि पर्याप्त हुनेछ । प्रत्येक दुई बर्ष वा जब–जब महत्त्वपूर्ण जीवन घटना हुन्छन्, जस्तै घर वा बच्चाको जन्म, यो एक सल्लाहकारको साथ तपाईंको सुरक्षा आवश्यकताहरूको समीक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण छ । बेलायतका लागि क्यास्परियन बीमासँग सुरक्षा विशेषज्ञहरूको टोली छ । नेपालमापनि धेरै वीमा कम्पनीहरु छन् । जुन तपाईलाई सही दिशानिर्देशका लागि मद्दत गर्न समर्पित हुनुहुन्छ ।
२, के तपाई स्ट्याम्प शुल्क फिर्ताको लागि हुनुहुन्छ ?
यदि तपाईंसँग व्यावसायिक सम्पत्ति स्व–निवेशित निजी निवृत्तिभरण वा सानो सेल्फ–प्रशासित योजना पेन्सन होल्डिङ व्यवसाय सम्पत्ति छ भने, तपाईं करदाताबाट छुटको कारण हुन सक्नुहुन्छ ।
एसडीएलटी रकम फिर्ता सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि हजारौं व्यक्तिले विगत १६ बर्षमा पेन्सनमा आफ्नो व्यवसाय परिसर हस्तान्तरण गर्दा स्ट्याप शुल्क तिर्ने हुन सक्छ । कम्पनीले तपाईंलाई त्यो पैसा फिर्ता लिन मद्दत गर्न सक्छ । यो निः शुल्क प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्ताव गर्दछ र ‘कुनै तोकिएको, कुनै शुल्क छैन’ ।
३, परिवार र सम्बन्धविच्छेद कानून समस्याहरूको लागि मद्दत पाउँनुहोस्
यदि तपाईं सम्बन्ध विच्छेदको लागि आर्थिक लगायत समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ, बेलायतको पारिवारिक कानून नेभिगेट गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईं साझा पाल्तु जनावरको भूतपूर्व पार्टनरसँग पनि विवादास्पद हुनुहुन्छ भने, यो सहयोग लिन भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ ।
सन् १९९२ मा स्थापित, लोयड प्लाट एण्ड कम्पनी एक विशेष परिवार र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धि कम्पनी हो जसले सम्बन्ध विच्छेद र वैवाहिक कानूनको क्षेत्रमा विस्तृत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यो बेलायतमा रहनुभएकाहरुका लागि जानकारी हो । यसले बच्चाहरू, सम्बन्ध विच्छेद र वित्तीय सम्झौतामा विवादमा विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ । विशेष गरी उच्च–नेट–वर्ल्ड क्षेत्रमा यसको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । लोयड प्लाट एण्ड कम्पनीले ब्लू क्रस एनिमल कोषसँग पनि काम गरेको छ । संसारको पहिलो पाल्तु जनावर–विवाह सम्झौता, एक अनुबन्धन कार्य हो जुन सम्बन्ध विच्छेद पछि पाल्तु जनावरको स्वामित्वको बाह्य रूपरेखालाई समेट्छ।
४, नयाँ घर किन्नको लागि सजिलो तरीका खोज्नुहोस्
ब्रिजिङ ऋण छोटो अवधिको वित्तीय व्यवस्था हो । जसले सामान्यतया मानिसहरूलाई श्रृंखलामा बिक्री र पूरा हुने मितिहरू बीचको भिन्नता घटाएर नयाँ सम्पत्ति खरीद गर्न मद्दत गर्दछ । यसको मतलब यो हो कि एक सम्पत्ति अर्कोको बिक्री अघि खरीद गर्न सकिन्छ, लचिलोपन र अतिरिक्त विकल्पहरू सिर्जना गरेर सहयोग गर्न सक्छ ।
बजार वित्तीय समाधान बिचौलिया र ग्राहकहरुलाई छिटो र लचिलो ऋणको एक दायरा प्रदान गर्दछ । यी ऋणहरु तिव्र रूपमा लगाइन्छ जुन लिलामी खरीदका लागि उत्कृष्ट हुन्छ र ऋण लिनेहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न तयार गरिएको छ, परिस्थिति जतिसुकै जटिल भए पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ ।
५, तपाईको सेवानिवृत्तिका लागि योजना बनाउनुहोस्
हामी मध्ये धेरै जसोमा प्रत्येक महिना पेन्सनमा जान पैसा हुन्छ, तर के तपाईले कहिले पेन्सन पाउनुभयो ? तपाईको निवृत्तिभरणको लागि कति राम्रो हुन्छ ? यदि तपाँई लामो बाटो अपनाउँनुहुन्छ भने, यो योजना सुरु गर्न हत्तार छैन ।
पेन्सनलाइट एक अनुभवी वित्तीय सल्लाहकार संग एक गैर–बाध्यता परामर्श प्रदान गर्दछ जसले तपाइँको विकल्पहरु मार्फत कुरा गर्न सक्छ किनकी उनीहरुलाई तपाइँको वर्तमान अवस्था थाहा हुन्छ । परामर्श फोनमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसैले तपाँई यदी बेलायतमा हुनुहुन्छ भने मद्दत उपलब्ध हुन्छ ।
६, एक विल लेख्न छोड्नुहोस्
विल तयार गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय सेवाहरू मध्ये एक हो । यदि तपाईं वैध इच्छा बिना नै पास गर्नुभयो भने, तपाईंले गर्नुहुने सबै कुरा कानून द्वारा परिभाषित तरीकाले साझा गरिनेछ, जुन तपाईंको रोजाइएको बाटो नहुन सक्छ । उदाहरण को लागी, यदि तपाईले पुनः विवाह गर्नुभयो भने तपाईले अपडेट गर्नु पर्छ, विशेष गरी यदि यसमा बच्चा समावेश छ भने अझ अनिवार्य हुन्छ ।
त्यस्तै, पावर अफ अटर्निनले अर्थात वारेसनामा धारीले तपाईंलाई आफ्नो समस्याहरू व्यवस्थापन गर्न वा तपाईको पक्षमा निर्णयहरू लिन सहयोग दिन्छ यदि तपाइँ मानसिक क्षमता गुमाउनुहुन्छ भने त्यसबेला यो उपयोगि हुनसक्छ । ३० बर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ एक पारिवारिक फर्म, प्रोबेट र ट्रस्टी सर्भिसले तपाईंलाई सस्तो मूल्यमा कुशल, सीधा सेवा प्रदान गर्दछ । कुनै अत्तिरिक्त शुल्कबिना, निश्चित शुल्कको साथ यसमार्फत सहयोग पाउँन सक्नुहुन्छ ।
७, राम्रो आर्थिक लागि बच्चा कदमहरू
यदि तपाईं भविष्य र तपाईंको आर्थिक अवस्थाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंको विकल्पहरू अन्वेषण गर्न सहयोग गर्दछ। तुलना गर्नुहोस् युके कोट्ससँग अनलाइन उपयोगी नियमहरू छन् जसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ ।
यो वेबसाईट सल्लाह र युक्तिहरूले भरिपूर्ण छ तपाईंको आर्थिक नियन्त्रण गर्न र तपाईंको परिवारलाई बचाउन मद्दत गर्न सक्छ । ईच्छा र सेवानिवृत्ति योजना मा विशेषज्ञ सल्लाह देखि बीमा र दैनिक बिल जस्तै चीजहरूमा पैसा बचत सल्लाह, तपाईं राम्रो सम्झौता र दिमागको शान्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
८, बचत गर्ने स्मार्ट तरीका खोज्नुहोस्
अधिक भन्दा अधिक बचतकर्ताहरू तिनीहरूको सम्पत्ती बचाउनको लागि उत्तम तरीका खोज्दै छन् र उनीहरूको वित्तीय सुरक्षा बढाउन अतिरिक्त ब्याज कमाउँन चाहान्छन् । नगद प्लेटफर्मको साथ बचत जमिन फ्ल्यागस्टोनले सेभरहरूलाई लगातार चेरी–छान्नको लागि उनीहरूको इष्टतम पोर्टफोलियो सहयोग गर्दछ ।
फ्ल्यागस्टोनको सेभर्सले तपाँईको पैसालाई नियन्त्रणमा राख्दछ, जसले उनीहरूको पैसालाई स्थानान्तरण गर्न र राम्रो दरमा नयाँ दर अवसरहरूको फाइदा लिनको लागि उत्तम तरिका निर्माण गर्दछ । फ्ल्यागस्टोन धेरै बचत खाताहरूको गेटवे हो, जसमध्ये धेरै एफएससीएस सुरक्षा समावेश गर्दछ ।
९, ऋण संकलन सजिलो बनाउनुहोस्
वास्तवमा ऋण प्राप्त गर्नु एक तनावपूर्ण प्रक्रिया हुन सक्छ । एक्सेस क्रेडिट म्यानेजम्यान्टले यसबाट तपाँईलाई टाढा लिन्छ । यसमार्फत ढिलो–तिर्ने ऋणीहरूसँग व्यवहार गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा उत्कृष्ट ब्यापार ऋण पुनःप्राप्तिको लागि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न २० बर्षको अनुभव प्रदान गर्दछ ।
कम्पनीले तपाईंको व्यवसायको आवश्यकताहरू बुझ्नको लागि समय लिन्छ । त्यसकारण तपाइँलाई तपाइँको कम्पनीको क्रेडिट नीति र प्रक्रियाहरू विकास गर्न वा परिमार्जन गर्न मद्दत चाहिएको छ, एक पूरा बिक्री खाता बजार, वा एक वा दुई छनौट खातामा मद्दतको लागि, एक्सेस क्रेडिट म्यानेजम्यान्ट मद्दत गर्न सक्छ ।
१०, आफ्नो व्हिस्की लगानी यात्रा आज सुरु गर्नुहोस्
व्हिस्कीको लोकप्रियताले यसलाई लगानीको दृष्टिकोणबाट स्वस्थ प्रस्ताव बनाइरहेको छ। नाइट फ्रान्क लक्जरी लगानी सूचक सन् २०१९ अनुसार दुर्लभ व्हिस्कीले विगत दशकमा ५४० प्रतिशत फिर्ताको प्रदर्शन गरेको छ । भीसीएल लन्डनमा आधारित ब्रोकरेज कम्पनी हो जसले लगानी ग्रेड स्कोच व्हिस्की पीकलाई वर्तमानमा सल्लाह प्रदान गर्दछ ।